Fantaro ny tantara mba hahalala ny fandaharam-potoan'ny ONU 2030: Martin Vrijland
Mitondra vaovao be dia be izahay amin'ny Internet ka niova avy amin'ny loharanom-pahalalana mba hahatsapan'ny kanyana. Tahaka ny niodinan'ny fahitalavitra avy amin'ny fampahalalam-baovao mankany amin'ny fialam-boly divay sy ny chip, notontosain'i John de Mol & co; Ohatra, amin'izao fotoana izao ny haino aman-jery sosialy dia momba ny horonantsary mahafinaritra sy mampihomehy ary mijery ny ataon'ny namanao ao amin'ny Instagram. Ankoatr'izay, zava-dehibe kokoa ny misy sary sy horonan-tsary mahafinaritra izay mitazona ilay ego fa tsy mbola mahazo fahalalana tena izy ny olona.
Na ny haino aman-jery na ny media sosialy dia samy mahatsiaro ho salama avokoa. Raha mahatsapa fandroana mafana ianao, dia halanao ny olona mandatsaka ranomandry ao amin'izany rano izany. Mampatahotra anao izany. Na dia mety ilaina aza izany, satria ny tontolo ivelan'ny rano fandroana dia angamba tsy dia mamy sy mamy kokoa noho ny heverintsika fa aleontsika hisafidy ny rano fandroana mafana. Ny haino aman-jery taloha ary ny fantsona haino aman-jery sosialy indraindray dia manome vaovao ratsy amintsika, saingy ny fidirana amin'ny alàlan'ny paompy mafana no tsy manelingelina ny fahafinaretana.
Tianay ho madio sy milamina ny tranonay ary te hampiseho amin'ny namanay ny gadget farany, fialan-tsasatra, fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro sy izay rehetra ao amin'ny media sosialy izy ireo mba hahitany hoe faly izahay. Indraindray ny fiainana hafa milamina kokoa, fa raha mbola tadiavintsika ny sarimihetsika, dia mifandray isika amin'ilay vondrona. Iza no mbola miandry ny 'fahamarinana'. Fa inona izany? Betsaka ny loharanom-baovao. Hoy ny iray ary ny iray kosa milaza an'io. Mahazo aina kokoa ny mijanona ao anaty rano mafana ary mizaha toetra tsara. Ny olona manakiana dia toy ny rano mangatsiaka amin'ny rano fandroana. Ireny olona ireny dia manana olana amin'ny zavatra rehetra azontsika atao ny manitrika ny tenantsika amin'ny fomba tsara. Olona ratsy ireo. “Mifoha ve? Ajanony io foana. Ao amin'ny toerana mety aho.
Ka raha misy olona toa an'i Martin Vrijland dia milaza zavatra, averinao mialoha izany. Ny tafika troll haino aman-jery sosialy dia nampihatra ny paikadin'ny fikapohana fenitra isaky ny forum sy fifanakalozan-kevitra amin'ny Internet. Ny teny misy fiampangana ratsy dia mifamatotra amin'i Vrijland tsy misy fanamafisana ary tsy te ho anisan'io vondrona io ianao. Tsy mijery ny atiny ianao. Raha voalaza amin'ny bilaogy na forum fa Vrijland dia mpikirakira tsikombakomba adala, raiso am-pahamarinana ianao. Tsia, tsy izy: ny andraikitry ny fanjakana no ao ambadik'izany fanentanana izany. Fotoana hitazana azy. Ndao hiampita lavitra ary hijery tsara ny atiny! Ianao no mahalala. Mialà aloha amin'ny fandroanao mafana, miakanjo mafana ary avy eo misotro rano madio sy madio. Manampy anao hahatsapa kokoa izany.
Tena ilaina ny mahatakatra hevi-dehibe vitsivitsy amin'ny fiainana. Tsy fandroana mafana fotsiny ny fiainana. Raha toa ianao ka amin'ny fety amin'ny sambo tsara tarehy ary milalao ny tarika dia iza no mitondra anao tsy ho eo amin'ny efitrano fandihizana, ilay maherifonao raha misy lavaka ao amin'ny fitsangantsanganana amin'ny Titanic? Raha mijoro amin'ny làlan-dalamby ianao amin'ny alàlan'ny kitapom-peo mba hihainoana ny mozika tianao ary tsy maheno ny lamasinina mandehandeha ianao; iza no manosika anao hiala amin'ilay lalambe miaro anao fa tsy ny mpamonjy anao? Raha tsapanao fa namonjy ny ainao izy, faly ve ianao fa nesorina avy tao amin'ny faritra nampiadananao? Raha miatrika horonan-tsary miaraka amin'ny telefaon-telefaona ny olona rehetra, rehefa sambatra ianao, faly ve ianao miaraka amin'ireo avy any ivelany izay tonga nihazakazaka niditra an-tsehatra? Izany dia tsara tokony hampitandremana ara-potoana. Izany dia tsara raha misy miditra an-tsehatra. ianao voahenjana tena marina a optimist ary tena tsara raha mahay mailo ianao indraindray. Izy io dia mamonjy ny fiainanao.
Raha te ho tafaraka ianao na hiditra amin'ny fifandraisana, dia te hahafantatra bebe kokoa amin'ny olona iray ianao. Rehefa manomboka miasa ho an'ny orinasa iray ianao dia matetika no te hahafantatra raha mahatsapa ao an-trano any ianao. Amin'ny ankapobeny, tiantsika ny hahafantatra bebe kokoa momba ireo izay ifandraisantsika amin'ny fifandraisana maharitra. Ny fanontaniana dia raha mba efa nijery ireo olona efa nihainantsika ela hatrizay ve isika? Ilay nampitaiina anay. Raha teraka tao am-ponja ny zaza, dia ny hany fantany izany dia ny fonja. Raha misy fitaovana milalao ao amin'ity fonja ity dia mahaliana sy fialamboly mahafinaritra izany. Manao ahoana ny tontolo ivelany? Raha efa fantatrao tsara ny kaontinanta izay nitombo ianao dia tsy midika izany fa mahita ny tena sary ianao. Hitanareo tao anatiny foana. Eny, mety nanao dia lavitra ianao ary mahalala firenena maro, saingy ny fanontaniana kosa dia ny nandokoanao ny endrik'izao tontolo izao. Ny fanatanterahana fa ity sary ity dia efa vita avy amin'ny kiana ary efa mihena ny fahitanao an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanabeazana, ny media ary ny politika. Nahazo aina tamina fandroana mafana fantatrao ianao.
Ahoana raha toa izany sodina mafana izany raha oharina amin'ilay tarika ao amin'ny Titanic? Ahoana raha tazonina hatrany amin'ny fialam-boly ianao, ka lasa gaga? Ahoana raha manomboka mahita ianao fa maro ny zavatra nianaranao tsy marina? Eny, azoko fa mieritreritra avy hatrany ianao hoe: “Eny, inona no fantatrao momba izany? Iza no milaza fa ny loharano dia marina. Aleoko mino ny fahamarinana ofisialy voamarina ofisialy notohanan'ny governemanta sy ny manam-pahaizana manokana. Tsy afaka manadihady momba izany irery ianao. Tsy manana ny fahalalana momba an'izany izahay. ”Azoko ny hevitrao, na izany aza dia mendrika tokoa hahitana raha tsy hitarika anao io fiaran-dalamby io. Izany dia dia mendrika tokoa hampiala ny mozika trance amin'ny findainao ary mijery tsara ny sorokao ianao. Izany dia dia mendrika tokoa hivezivezy amin'ny kodiarana ka hatrany amin'ny tsorakazo rehefa manao rano.
Andao hijery sy hijery izay nitranga tao. Ianao dia mandray ny olana. Rehefa dinihina tokoa, fikomiana fotsiny eo amin'ny soroka dia snapchat fotsiny. Handeha vetivety isika manaova ezaka. Mahaliana ny mahatsapa hoe iza no nandoko ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao ary nahatakatra fa nasiana rano mafana foana ianao. Mahaliana ny mahita fa niady tamin'ny ady an-trano espaniola i George Orwell ary nahita fa ny fahasamihafana niainany tamin'ny ady dia nentina niova tanteraka teo amin'ny tokantrano noho ny fahitany azy ireo. Mahaliana ny nanoratan'ity lehilahy ity ny boky 1984, ao amin'ilay niverenany ny "fanitsiana ny fahamarinana". Mandeha lavitra noho ny fanazavana ny lafiny sasany amin'ity fanodinkodinana amin'ny lahatsoratra 1 ity, koa manoro hevitra anao aho mba hanao fanadihadiana. Diniho ny fomba ifandraisan'ny siansa sy ny tantaram-pianarana. Marina ve fa ny mpahay siansa momba ny toetrandro izay manao feo hafa tsy mitovy? Ja, toa tsy toy izany. Marina ve fa ny tantaram-pianarana dia iharan'ny fanodinkodinana ary hoy i Winston Churchill, "Ny tantara dia nosoratan'ny mpandresy"? Ja, toa tsy toy izany.
Ahoana raha hitanao fa tena nisy ny zava-nitranga lehibe namboarina teo amin'ny tantara? Eny, efa nahatsikaritra ny fihetsikareo aho.Inona moa raha natanjaka ny fampielezan-kevitra nandritra ny am-polony taona maro ka nahavita nandoko sary hafa samy hafa nandritra ny taranaka maro? "Eny, fa raha izany, olona tsy maintsy nitsangana izay nilaza zavatra momba izany?" Eny, izay ihany koa! Ny fahitalavitra, gazety ihany, Facebook no mampiseho izay tadiavinao ho hitanao. Ny fahamarinana ao ambadiky ny sivana. Matetika ny governemanta dia mampiasa tongady izay mandeha amin'ilay tantara ary mampifandray azy ireo amin'ny vondrona lehibe iray. Amin'ity fomba ity dia ahafahanao manosika mora foana ny tsikera amin'ny fiaraha-monina, satria raha manana ny media rehetra ao am-paosinao ianao dia feon'ny fijerin'ny olona anao. Hanao izay fomba hafa isika.
Manoro hevitra aho mba handinihanao ireto olana manaraka ireto. Ny fantsom-pahefana izay nanampy an'i Lenin (sy ny mpandimby azy Stalin) dia ilay sakan-jiro mitovy amin'izany izay nanampy an'i Adolf Hitler tao anaty lasitra ary ny ady lehibe voalohany sy faharoa dia nokasaina hamorona korontana mba hamoronana filaminana. Izay am-bava. Mandehana ary.
Tamin'ny ady lehibe voalohany, dia natokana ho an'ny fanjakan'ny Isiraely tao amin'ny Balfour fanambarana. Ao amin'ny Fifanarahana Haavara avy amin'ny 1933 dia efa voarakitra tamin'i Alemaina ny fifindra-monina Jiosy tany Palestina. Ny fanjakan'i Isiraely dia naorina taoriana kelin'ny Ady Lehibe Faharoa. Ny Ady Lehibe Faharoa dia nandray anjara lehibe teo amin'izany.
Ilay Adolf Hitler mitovy ihany koa izay voalaza fa nankahala ny Jiosy ary nitaona azy ireo tamim-pitandremana sy nitady fahadiovana, 150.000 dia manana antsasaky ny ampahefatry ny Jiosy ao amin'ny tafiny, ary ny ankamaroany dia mpiady miady. Nanana jeneraly jeneraly sy mpankasitraka antsasaky ny Jiosy 15 farafahakeliny izy, niaraka tamin'ny Jiosy hafa am-polony tao ihany koa. Ny tena mampiavaka indrindra dia ny an'i Field Marshal Erhard Milch, mpanafika faharoa an'i Hermann Goering. Milch dia nanana andraikitra lehibe tamin'ny fametrahana ny Luftwaffe. I Milch dia nanana rainy jiosy ary mety ho reny jiosy koa.
Betsaka ny feo fa ny sarin'ny ranon-taova, antsoina hoe 'holocaust', dia tantara fampielezankevitra, tohanan'ny porofo noforonina. Ny fikorontanana kognitif dia mitranga haingana rehefa mieritreritra izany ianao. Ny fahalalana samihafa dia mahatsiaro toy ny vera misy rano mangatsiaka amin'ny rano fandroana. Te-ho esorina amin'ny tarika eo amin'ny Titanic ve ianao raha milentika ilay sambo? Eny, angamba.
Ny soavaly amin'ny volondoha dia zava-dehibe ny hananana jamba, mba tsy hanelingelina azy loatra amin'ny asany. Ho an'ny olona iray dia zava-dehibe ny hanaisotra ireo jamba ary hahazoana sary tsara amin'ny tontolo manodidina azy. Afaka miandrandra ny ho avy ianao. Ny fanamarihana momba ny fitaka teo amin'ny tantara, dia naharihary fa mitovy ny tanjaky ny herinaratra izay nilalao ny vahoaka. Ampio ny fahavalo namorona tena ao anaty lasitra mamorona korontana. Manampy anao hahatratra tanjona ambony kokoa izany. Ahoana raha nanampy an'io Adolf Hitler io fambolena herinaratra tamin'ny fanaovana vondron'olona maro ho faty ary avy eo dia afaka manome azy ireo ny toerany tsy azo ihodivirana? Fa maninona no manodidina an'i Adolf Hitler amin'ny olona avy amin'ny foko jiosy raha te-hampihena azy rehetra izy ireo? Topazo maso hoe iza no namatsy vola an'i Hitler. Amin'ity tranokala ity sy amin'ny arisanao dia hahita bebe kokoa ianao raha mampiasa ny sehatry ny fikarohana. Fanombohana tsara iray hafa ohatra ity lahatsoratra ity. Raiso ny manahirana hanindry ny atiny ary handalina izany.
Fotoana fohy taorian'ny ady lehibe faharoa dia nisy firenena natsangana teo amin'ilay tany izay efa natokana tao amin'ny fanambarana Balfour nandritra ny ady lehibe voalohany (ny fanjakan'ny Isiraely). Niorina ihany koa ny Firenena Mikambana. Ny fanontaniana ankehitriny dia izao: efa nomanina ela ve ity rehetra ity? Ny fanontaniana lehibe tokony hapetrakao amin'ny tenanao dia hoe: fantatrao ve ny fitsipika romana taloha amin'ny "Order from Chaos" amin'ny ady lehibe rehetra? I Hitler ve ilay fahavalon-doza mampidi-doza izay nanome ny Allies alibi handroba an'i Eropa ary tokony hametraka baiko vaovao avy amin'izany korontana izany? Ny Hitler ve no hery mitondra ny fifindra-monina malaza amin'ny fanjakan'ny Isiraely? Vakio eo.
Ny lehibentsika Bernhard, no tompon'andraikitra lehibe ao ambadiky ny fananganana ny vondrona Bilderberg. Ny vondrona Bilderberg dia namorona ny fototry ny vondrona eoropeana. Ny filoha voalohany an'io EC io dia mpisolovava iray izay notarihin'i Adolf Hitler. Walter Hallstein no anarany.
Azoko rehefa mieritreritra ianao hoe:Izany no tena havanana. Maheno an'i Brexit, mpankafy Nexit aho. Maheno i Myry Baudet". Io sary io dia namboarina tamin'ny haino aman-jery mitovy sy ny paika politika. Izy ireo dia manandrana mampifandray ireo tsikera rehetra momba ny tantaram-pirenena sy ny siansa ofisialy amin'ilay marika 'namboarina tsara'.
Raha manomboka mahita isika fa nandritra ny am-polony taona maro no nilalao ny milina herinaratra, dia fantatsika fa miatrika script izay nahavitany sy novonoina ny ady araka ny drafitra. Fantatsika koa fa ny planina an'izao tontolo izao dia kasaina ary anisan'io andalana lehibe io izy. Ary raha vao tsapantsika fa, azontsika fantarina fa ny tantara sy ny fandisoana ny siansa dia mampientam-po nampiroborobo ny media sy ny media sosialy. Azo atao ihany izany satria ny fantsom-pahefana taloha iray dia mifehy tanteraka ny loharano mafana amin'ny rano fandroana anaovanao. Moa ve ny fahatsapanao an'izao tontolo izao novain'ny tompon'andraikitra ny fahitana ny fisian'ny hery taloha taloha?
Ankoatry ny zava-misy fa misy ady hafa nokasaina (ady iray ho an'i Jerosalema marimarina), ny fiovana lehibe eo amin'ny fahefana dia eo amin'ny fandaharam-potoana amin'ny fotoana fohy ho toy ny dingana iray eo anelanelan'ny ady lehibe farany. Ity fiovan'ny fahefana ity dia midika fa hirodana ara-toekarena i Etazonia ary mety hiala amin'ny OTAN mihitsy aza izy ireo noho ny tsy fitovian-kevitra loatra. Hitantsika fa hita taratra amin'ny tsy mivaingana ny tsy fitovian-kevitra resaka omaly. I Donald Trump sy i Emanuel Macron dia samy nanao ny tsy fitovian'izy ireo nandritra ny fihaonana an-tampon'ny NATO tany London.
Na dia ny firongatry ny toekarena any Etazonia aza dia mety hitarika ho amin'ny fitrandrahana (efa nomanina) nataon'i Trump, dia any Eropa ho an'ny toekarena eropeana ny fandikilovana Brexit. Satria nampifandray ireo mpanao politika ireo tamin'ny mpanao marika (havanana) tsara ny stigma namboarina tamim-pitandremana, ny krizy ara-toekarena toy izany dia afaka manome ny krizy ho amin'ny fanatontoloana bebe kokoa sy handaminana ny hevitra manivaka. Nanohana izany indray aho ity lahatsoratra ity sy amin'ny maro hafa. Azonao atao indray ny mamaky azy io.
Ny iray amin'ireo stigmas mifandray amin'io (elatra havia havanana) tsara dia ny an'ny 'toetr-javaboary toetrandro'. Angamba azo ampiana izany fa ny tarika dia misolo tena ny tombotsoan'ireo indostria lehibe taloha, ho antony iray handavana ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany. "Nikarakara ny tombontsoan'ny indostrian'ny solika sy ny fitrandrahana arintany izy ireo«Hatao ho adihevitra izay hoentina avy eo am-patana. Ary noho izany, tamin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny lozam-pifamoivoizana sy ny fanilikilihana, ny lalana dia misokatra mba hiatrehana farany ny fitsikerana ny fandaharam-potoana UN efa ela 2030 (mpandimby ny fandaharam-potoana 2021).
Ny novinaviko dia ny ho lasa hery mahery vaika vaovao izay handresy an'i Eoropa i Tiorkia. Ho mora kokoa izany raha misy ny fianjerana ara-toekarena (efa nomanina) tonga any Etazonia ary nanapa-kevitra i Trump fa ho lafo loatra ny manome fiarovana any Eropa sahirana (miaraka amin'ny fanelingelenana toy ny Macron miantso ny hoe lozin'ny atidoha NATO). Raha nianjera tamin'ny lafiny ara-toekarena i Eropa (vokatr'izany, ny fifampiraharahana Brexit efa nomanina), dia ho lasa olana fanampiny ny hitarika ireo vola ambony kokoa amin'ny tetibola NATO. Noho izany dia misy ny fotoana mety handraisan'i Etazonia ny tanany avy any Eropa mba hamoronana toerana hamerenako azy nandritra ny taona maro: ny fitsanganana amin'ny Fanjakana Ottoman. I Turki dia afaka miditra ao amin'ny fahabangana herinaratra raha toa ka miafara amin'ny korontana i Eropa ary afaka miasa ho mpamonjy amin'ny olana natsangana ity.
Ary isaky ny fiovan'ny hery sy ny fanovana ara-politika dia ho hitanao fa ny tondrozotra mitovy foana dia atsipy foana. Aza mihevitra ankehitriny fa rehefa nahazo hery i Erdogan dia lasa henjana Islamika henjana isika. Tsia, ho hitantsika ny mifanohitra amin'izany. Ho hitantsika eo ny fanalalahana mitovy amin'ny finoana silamo izay niainantsika tao amin'ny Kristianisma. Ny fantsom-pahefana vaovao izay hoentin'i Eoropa dia handray ny fandaharam-potoanan'ny avana. Io no fandaharam-boatra ambarako ao amin'ny bokiko: ny tondrozotra ho an'ny governemantany maneran-tany Luciferian, izay hiarahana amin'ny fivavahana rehetra eran-tany. Tandremo tsara ny loko avana ao amin'ny famantarana.
Io avana io dia malaza ary tandindon'ny filaharan'izao tontolo izao vaovao. Ary na dia hitantana mafy any Eropa aza i Tiorkia dia tsy hanimba velively ny tondrozotra mankany amin'ny filaminana eran'izao tontolo izao izany. Izy io anefa dia hamoaka ny hery mahery vaika vaovao izay hanampy amin'ny fananganana ny ady lehibe fahatelo. Tsy mitsako izany aho amin'ny ankibeniko. in ity lahatsoratra ity Manazava aho hoe ahoana ny fandaharam-potoana dia teo amin'ny taratasy tao 1871. Amin'izany ady farany izany (izay ho manodidina an'i Jerosalema) dia hitsangana hiady amin'i Etazonia sy Israely ny fanjakana Ottoman. Izany no miteraka korontana farany farany mba hampifantohana ny fahefana ho an'ny Firenena Mikambana.
Na dia eo aza ny zava-misy fa hisy ny tolona ilaina ary hipoitra ny korontana ilaina, mandritra izany fotoana izany, ny hery ara-politika dia hahazo ny hery izay hanohizany ny fandaharam-potoan'ny ONU 2030, na eo aza ny korontana rehetra. Ity lohahevitra ity dia natao ho fepetra hentitra izay tokony hiarovana ny tontolo iainana, fa raha ny marina dia manana tanjona ny hanao ny zava-drehetra hita ao amin'ny 'internet amin'ny zavatra' ary manangana tranonkala fifehezana dizitaly izay mamily ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Nanazava be dia be aho ity lahatsoratra ity. Ilaina araka izany ny famakiana azy io indray.
Mitaky fiezahana lavitra hialana amin'ny feon-kira mahasarika ao amin'ny barika Titanic ary hiainga mankany amin'ny tsipika mahavelona. Mila manao zavatra ianao.
Azafady azafady jerena ny fandaharam-potoana 2030 ary mijereva ao amin'ny tranokalanay mba hahitana mazava tsara izay fivoarana rehetra mandray anjara amin'ny fampivoarana an'io fandaharana io. amin'ny ity tranonkala ity Hahita fanazavana momba izany momba ny fandaharam-potoana 2030 ianao. Ilaina ihany koa ny mamaky ny bokiko. Eto dia manazava aho fa ny avana sy ny lahy tsy miandany amin'ny maha-lahy sy ny vavy dia mitana ny anjara toerana ao amin'ny script master. Manazava ihany koa aho hoe iza ny agenda transhumanist no ao ambadik'izany ary maninona izy rehetra no mifandraika amin'ny fanagadrana ny gadra ny olona amin'ny fiaraha-miasan'ny AI (intelligence intelligence). Tena ilaina ny mivoaka ity hafatra ity. Matoky ny fanolorantenanao sy ny anjara birikinao aho. Raiso ny olana ary alao ny fotoana ary mifoha raha mbola azonao atao.
Lisitry ny rohy loharano: paulcraigroberts.org, alt-market.com
Tags: 2021, 2030, agenda, EU, Featured, toetr'andro, London, Macron, OTAN, ambony, Trump, vn
4 Desambra 2019 ao amin'ny 15: 47
Lahatsoratra lehibe indray Martin. Mampamangy!
Eto aho dia mieritreritra fa mihatra ny fanambaràn'i Johan Cruyff (amin'ity lahatsoratra ity, raha ny hevitro):
"Mila mitifitra ianao raha tsy izany dia tsy afaka maka isa ianao."
"Raha tsy afaka mandresy ianao dia tsy maintsy miantoka fa tsy ho resy ianao."
"Raha manana ny baolina isika dia tsy afaka isa."
"Ho hitanao ihany ianao rehefa tonga saina."
Ary azo antoka fa tsy misy ifandraisany amin'ny baolina kitra ..; )
4 Desambra 2019 ao amin'ny 16: 51
Lahatsoratra tena tsara sy mazava. Ary ho an'ireo mbola tsy manana ny bokinao dia. Buy!
4 Desambra 2019 ao amin'ny 19: 11
Apetrakao ho ratsy ny fandroana mangatsiaka, nefa tsara ho anao izany. Naka fandroana naharitra nandritra ny fotoana kelikely aho ary rehefa afaka kelikely dia nanomboka nahatsapa fahatsorana. Ny tombony fanampiny dia ny hoe mitombo ny fanoherana ary lasa salama. Mihatra amin'ny atidoha koa, manome sakafo amin'ny fahamarinana. Mangatsiaka any am-piandohana, fa rehefa mandalo izany ianao dia faly sy voadio.
Izany no antony itondranao ny orana mangatsiaka amiko 😉👍
4 Desambra 2019 ao amin'ny 21: 36
Ho avy ny hoavinao raha tsy mitodika ny ...
5 Desambra 2019 ao amin'ny 00: 21
Ry mpamaky malala: jereo tsara ny manodidina anao any Holandy ary vakio ny lahatsoratra tamin'ny herinandro lasa…
Efa eo ho eo izy io any Holandy sy Eoropa. Diniho tsara ny zavatra fandehany. Tena tsara.
Tsia, aza mijery ny fahitalavitra na ny gazety. Nanome antoka izy ireo fa tsy mahita izany.
Ny tiako tenenina: Tena mijery tsara.
Vakio eto ireo tranonkala. Ny iray momba ny psikolojia, ohatra.
Any Holandy dia tsy mampaninona ihany ary ny teknolojia mahatsapa ny toby digital dia mihodina tsikelikely.
Fakantsary hendry, polisy platoons, fakan-tsary amin'ny lalambe rehetra. Fanangonana data lehibe ..
Isao ny isan'ireo fakantsary hitanao ao anatin'ny iray andro.
Ny toby fanabeazana holandey dia antsoina hoe: "Healthcare mental":
> Toerana GGZ.
> Ivotoerana fikarakarana tanora.
Tsara tarehy ivelany; horohoro ao anatiny.
5 Desambra 2019 ao amin'ny 01: 02
Izany no mahatonga anao mihamamo. Nomena anarana mamy be izany: ny psycholance
5 Desambra 2019 ao amin'ny 18: 15
Afaka manomboka ny fampiharana ny fampiharana stasis
5 Desambra 2019 ao amin'ny 01: 11
Ny kitapo fikolokoloana GGZ ho an'ireo mpanohitra mpanohitra
5 Desambra 2019 ao amin'ny 01: 13
Toeram-pianarana tanora holandey. Tsara tarehy ivelany, mampatahotra ao anaty. Jereo ireto sary fakantsary miafina ireto:
5 Desambra 2019 ao amin'ny 01: 25
Vakio eto ary ho jerena izay tohin'ny:
5 Desambra 2019 ao amin'ny 01: 37
Jereo izay alehany. Toy izany koa ny raharaha any Sina:
7 Desambra 2019 ao amin'ny 00: 12
Moa ve isika hametra-panontaniana ny famonoan-drazana izao fa tsy izany no tanjona!
Merkel dia nitondra fanomezana 60 tapitrisa euros ($ 66.6 tapitrisa).
7 Desambra 2019 ao amin'ny 13: 15
Rahoviana i Merkel handeha ho fahatsiarovana ny Famonoana Famonoana Tambabe amin'ireo kristiana Rosiana nataon'ny "Kominista". Afaka miandry ela be ve isika? Eny, ahoana no nahatonga izany?
Izany dia raha diso aho nitranga nandritra ny Ady Lehibe 1. Tombanana ho 40 tapitrisa farafaharatsiny
Novonoina ny Kristianina. Anisan'izany ve ny andro fahatsiarovana ao Holandy? Teboka intelo. Inona no ataon'ireo mpitarika 'kristiana'?
10 Desambra 2019 ao amin'ny 14: 09
Oh, Vrijland, inona no ataonao! Tsy dia ratsy izany tenin'ny polisy izany:
« Ny teknolojia marani-tsaina sy fitantanana manerantany teknolojia dia hamonjy ny toetrandro
Any amin'ny sehatry ny polisy, maniry ny fandraràn'ny polisy sy ny mpamatsy "fanampiana" ianao »
Total visits: 16.007.193
Martin Vrijland op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1
milalao totozy op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1
hennag op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1